Dowladda oo shaacisay in 22-ka bishaan la hakin doonno dhaq-dhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo shaacisay in 22-ka bishaan la hakin doonno dhaq-dhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinta caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo la xiri doonno dhamaan dhaq-dhaqaaqa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
War-qoraal ah oo kasoo baxay wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomalaiya ayaa lagu sheegay in 22-ka bishan oo loo asteeyay in la caleemo saaro madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo aanay jiri doonin wax duulimaadyo rayid ah.
Waxay arrintaan ka mid tahay qaban-qaabada xafladda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo oo guddi ka kooban lix qeybood loo xilsaaray, waxayna cadaadis kale ku tahay shirkadaha diyaaradaha iyo dadka dhoofa.
Dhinac kale, ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in si weyn loo adkeeyo, iyadoo la xiri doono dhamaan wadooyinka waaweyn ee magaalada ku yaala magaalada, sida uu ku dhawaaqi doono maamulka gobolka Banaadir.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale wadooyinka iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho loo xiray doorashadii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, iyadoona dadka Muqdisho ku nool ay bandow ku jireen muddo labo maalmood ah.